ब्रम्हाण्डमा कति तारा छन् पत्ता लागिसक्यो-प्राध्यापक गेरी गिरमोर – BIG FM 101.2 MHz
Home » अन्तराष्ट्रिय » ब्रम्हाण्डमा कति तारा छन् पत्ता लागिसक्यो-प्राध्यापक गेरी गिरमोर
ब्रम्हाण्डमा कति तारा छन् पत्ता लागिसक्यो-प्राध्यापक गेरी गिरमोर
काठमाडौं । जब तपार्इँ हामी रातमा आकाशमा झिलमिल तारा देख्छौँ, तब हाम्रो मनमा एउटा जिज्ञासा सधै उठिरहन्छ स् आखिर ब्रम्हाण्डमा कति तारा होलान् रु हुनत गीत तथा साहित्यमा नौलाख तारा भन्ने गरिएको छ । तर ब्रम्हाण्डमा त्यो भन्दा कैयन् गुणा धेरै तारा भएको वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीमा जति समुद्री तट छन् र त्यसमा बालुवाका कण छन्, त्यति नै संख्यामा ब्रम्हाण्डमा तारा छन् ।अमेरिकी खगोलविद् कार्ल सगनले पछिल्लोपटक यस्तो दाबी गरेका छन् । एक टेलिभिजन शोमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
तर के उनको दाबी सही हो त रु के ब्रम्हाण्डमा रहेका ताराको गणना सम्भव छ त ?
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका खगोलविद प्राध्यापक गेरी गिरमोरले आकाशगंगामा रहेका ताराहरुको गणना गरिरहेका छन् । आकाशगंगामै हाम्रो सौर्यमण्डल रहेको छ । उनले एउटा परियोजनाको अगुवाई गरिरहेका छन् जसले युरोपेली अन्तरीक्ष यानका माध्यमबाट आकाशगंगामा रहेका ताराको गणना गर्दैछ ।
ब्रम्हाण्डमा आकाशगंगाको संख्या पत्ता लगाउनुअघि यो पत्ता लगाउनुपर्छ कि त्यो कति चम्किलो छ रु के अरु सबै आकाशगंगा हाम्रै आकाशगंगा सरह छन् वा फरक छन् रु
बालुवाका कण कति?
पृथ्वीमा रहेका समुद्री तटमा रहेका बालुवाका कण बराबर ब्रम्हाण्डमा तारा रहेको दाबी गर्नेहो भने बालुवाका कण कति छन त रु
यो पत्ता लगाउनका लागि समुद्री तटको संख्या र घनत्व कति छ रु त्यो पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । तटको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइको मापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओपन स्ट्रिट म्याप यस्तो परियोजना हो जसमा विश्वका करीब २० लाख मानिसले डाटा शेयर गर्दछन् । अमेरिका, बेलायत, क्यानडाका सरकारले समेत यसमा आफ्ना डाटा शेयर गर्ने गरेका छन् ।
पानी तथा यसको व्यवस्थापन गर्ने संस्था डेल्टर्सका शोधकर्ता जेनेडी डोनचेट्सका अनुसार ओपन स्ट्रिट म्यापको तथ्यांकको हिसाबले एउटा समुद्री तट औसतमा १।९ किलोमिटर लामो हुन्छ । पृथ्वीमा बालुवायुक्त समुद्री तटको लम्बाई करीब ३ लाख किलोमिटर छ ।
एक हिसाब अनुसार एक घनमिटर बालुवामा एक हजार करोड कण हुन्छन् । यस प्रकारले ३७ हजार ५ सय करोडलाई १ हजार करोडले गुणा गर्ने हो भने पृथ्वीमा समुद्री तटमा रहेका बालुवाको कणको संख्या पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसरी हिसाब गर्दा बालुवाको कणको संख्या ३।७५ को पछाडि २१ वटा शून्ना, अर्थात् ३७ अर्ब ५० करोड खर्ब हुन आउँदछ ।